Fanka Heesaha iyo Aragtida Islaamka | Vol: 01 – Cad: 81aad – Indheergarad
HomeMaqaalloFanka Heesaha iyo Aragtida Islaamka | Vol: 01 – Cad: 81aad
February 4, 2021 Cabdifataax Barawaani Maqaallo 0
Indheergarad – Feebarweri 04, 2021 – Hakis – Vol: 01 – Cadadka: 81aad
“With out music, life would be a mistake.”
“Muusig la’aan, noloshu dembi baa ay ahaan lahayd.”
Fanku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha bila ee qurxiya nolosha bulshada. Nolol aan fan ku lammaanayna waxa ay la mid tahay nolol nuxurkii iyo dhadhankii uu ka guuray oo ka dhintay. Halka biyuhu ugu jiraan aadanaha iyo noolaha kaleba, ayaa uu fankuna ugu jiraa nolosha. Fankaasi ha ahaado mid la sawiro, lagu hadlo oo lagu heeso ama lagu gabyaba. Mid mid ka dhacaana ma jiro oo mid waliba waxa uu buuxiyaa kaalin weyn oo aan la qiyaasi karin, lana suureyn karin. In waxa quruxda badan laga dido, oo laga sarriigto, la iskuna deyo in indhaha iyo dhegaha dadka laga xaaraantimeeyana waa dembi weyn oo laga gelayo dabeecadda iyo quruxda nolosha ayaa aynnu odhan karnaa. Waa laga yaabaa in aan quruxdu yeelan halbeeg sugan oo dadku isla wada yaqaan, laakiin waa biyo kama dhibcaan in qof kasta oo dunida guudkeeda saaran uu jecelyahay daawashada fan la sawiray oo indhihiisu aanay ka jeedsanayn, ama ku jabaq iyo dhawaaq toosan ah oo habdhac odhaaheed ka soocan hadalka intiisa kale leh, loona garan og yahay suugaan, hees, gabay, maanso, iwm.
Diintu waa baahiyaha ruuxiga ee qofku aannu ka maarmin, hore iyo dambeytaba. Iskuna deyda toosinta, hagidda iyo sugidda qummanaanta qofka iyo akhlaaqihiisa. Diintu in ay wanaaggii iyo quruxdii aadanaha dhexyaallay wax ku kordhiso mooyaane, lagama yaabo in ay wax u dhinto. Haddaba, fanka iyo diintu ma is diidayaan? Dabcan, fanka kiisa loo yaqaan heesaha iyo diinta, teeda Islaamka ah ee Soomaalidu haysato iyo ummado kaleba, ma is diidayaan oo ma is xaaraantimaynayaan? Maxay se isu xaaraantimayn? Diintu kaalin baa ay leedahay, kaalinteedaasi waa ma guurto oo siyaasad, fan iyo shay kaleba ma buuxin karo. Si kasta oo looga dhergo waxyaabaha kale, baahidii diineed iyo ruuxeed waa ay taagantahay.
Sidaas oo kale ayaa fanku kaalin ugu leeyahay nolosha aadanaha, oo si kasta oo la iskugu dayo in lagu hambabaso shay kale ay weli naftu u tebayasaa baahidii faneed iyo dhegaysiga heesaha. Fahanka isku deyaya in uu mid ku seeteeyo mid kale, waa mid nafta qudhgoynaya oo deldelaya. Horaa loo yidhi “Qoolley qoorqabad biyo kuma cabto.” Naftuna haddaan heesihii loo furin, wallee diin in aysan qoorqabad ku haysanayn baa ay ila tahay. Waxa se ay maslaxaddu ku jirtaa in diintana booskeeda loo daayo, fankana booskiisa loo daayo. Labaduba nolosheenna waa ay bilayaan oo dhisayaan, iyaga oo ka bixinaya una muujinaya sawir ka geddisan kolka mid keliya uu muuqdo. Ummad aan fan lahaynna, waa ummad dhimatay ama u dhow dhimasho. Waa tii uu lahaa gabyaagii reer Maraykan ee Henry W. Longfellow (1807-1882) “Music is the universal language of mankind” oo ah “Muusiggu waa luuqadda caalamiga ah ee aadanaha.”